कालजयी किताब | Nagarik News - Nepal Republic Media
५ श्रावण २०७५ १० मिनेट पाठ
चार सय वर्षअघिको उनको टिप्पणी अहिले पनि उत्तिकै मननीय छ ।वर्ष दिनमा नेपालभर विभिन्न विधाका २ हजारभन्दा बढी किताब प्रकाशित हुन्छन् । प्रश्न उठ्छ–बेकनले भनेझैं हृदयदेखि नै आत्मसात गरेर पढिने ‘कालजयी’ किताब कति छन् ? ‘त्यस्ता किताब औंलामा गन्न मुस्किल छ,’ गम्भीर पाठकको जवाफ यस्तै हुन्छ।
केही साताअघि पत्रकार मित्र सुदर्शन घिमिरेले फोन गरे, ‘स्वामीजी (उनले मलाई प्रेमपूर्वक यही सम्बोधन गर्छन्), कता हो ? एउटा किताब दिनुछ, आजै भेट्न मिल्छ ? ‘अफिसमै छु, आईहाल्नुस्,’ मैले कुराकानी टुंग्याएँ । नभन्दै केही बेरमै चिटिक्क आकारको किताब लिएर आए उनी । किताब हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै हिँडिहाले।
‘अमर पुस्तक’, जसको मूल लेखक भारत, उडिसाका मनोज दास अनि नेपालीमा पुनर्लेखक मोहनकुमार दाहाल । शीर्षकले नै तान्यो । तुरुन्त पाना पल्टाएर विषयसूची हेरेँ–हाम्रा पुराना ग्रन्थहरू जस्तोः वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, पञ्चतन्त्र, जातक र अर्थशास्त्रबारे लेखिएको रहेछ । यस्ता सर्वकालिक पूर्वीय चिन्तनमा आधारित भएकाले उनले ‘अमर पुस्तक’ नाम दिएको हुनुपर्छ । यसका लक्षित पाठक बालबालिका, किशोरकिशोरी र तन्नेरी पुस्ता हुन्।
वैदिक ज्ञान र प्राचीन सम्पदाका अनुसन्धाता लेखक दासले साढे चार दशकअघि ‘बुक फरइभर’ किताब सार्वजनिक गरेका थिए । हो, यही किताबलाई नेपाली भावानुवाद र पुनर्लेखनपछि ‘अमर पुस्तक’ नाम दिएर सिकाइ समूहले बजारमा ल्याएको हो । किताब अद्योपान्त पढ्ने अवसर केही दिनपछि मात्र जुर्यो । सरल शैलीमा सचित्र वर्णन गरिएको ५६ पृष्ठको किताब एकै बसाइमा पढी सिध्याएँ । विषयवस्तु गहन तथा जीवनोपयोगी छ । पाठकलाई व्यावहारिक तथा शाश्वत चिन्तन आत्मसात गर्न यसले घच्घचाउँछ । पढ्दै जाँदा मलाई यस्तै अनुभव भयो।
‘वेद’बारे उपयोगी जानकारी समेटिएको छ । ‘यसमा कुनै धर्मावलम्बीको शिक्षा मात्र होइन, साधक (ध्यान–साधना गर्ने व्यक्ति) को अनुभूति छ । वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, पराशर, मधुच्छन्द लगायत वैदिक ऋषिका सन्दर्भ यसमा आउँछन्,’ लेखमा उल्लेख छ । लेखकले ऋक्, यजुः, साम र अथर्व वेदलाई छोटकरीमा बुझाउन खोजेका छन् । करिब ३८ लाख वर्षअघि ‘वेद’ जन्मिएको हो । पदार्थ विज्ञान, कर्म, स्वभाव, रीतिरिवाज, परमात्मा आदिबारे यसमा विवेचना छ।
‘वेद’कै अंग मानिँदै आएको उपनिषद् एक सय आठवटा भए पनि ईश, मुण्डक, माण्डूक्यलगायत दशवटालाई मुख्य मानिन्छ । ‘आत्मा’को अस्तित्वबारे बुझाउन उपनिषद्मा उल्लेख गरिएको उदाहरण मननीय छ । ज्ञानी याज्ञवल्क्य र राजा जनकबीच भएको संवादको माध्यमबाट ‘आत्मा’लाई बुझाउन खोजिएको छ । सूर्यास्त, ढाकिएको चन्द्रमा, निभेको आगो र वाणी हराएको स्थितिमा मानिसले ‘आत्मा’बाट प्रकाश पाउँछ भनी याज्ञवल्क्यले राजा जनकलाई प्रस्ट पारेका छन्।
उपनिषद्का आयामलाई बुझिने ढंगले उठान गरिएको छ यसमा । दुई हजार वर्षअघि महर्षि व्यासद्वारा लेखिएको ‘पुराण’ मा रोचक तथ्य समेटिएको छ । पाश्चात्य विज्ञानले ‘सोलार सिस्टम’को केन्द्र सूर्य हो भनी पत्ता लगाउनु भन्दापहिले नै विष्णु पुराणमा यसबारे उल्लेख गरिएको जानकारीले पाठकलाई अचम्भित पार्न सक्छ । पुराणमा उल्लिखित निश्चित कालचक्र पूरा भएपछि सृष्टि प्रलय हुने तथ्य स्टिफेन हकिङको ‘बिग व्यांग’ सिद्घान्तसँग मिल्न पुग्छ । यस्ता जानकारीले पाठकलाई तानिरहन्छन्।
वाल्मिकीद्वारा रचित ‘रामायण’मा कर्तव्यपरायण, प्रेम, भ्रातृत्व, आदर्श आदि छ । भानुभक्त आचार्यले नेपाली सन्दर्भअनुसार पछि ‘नेपाली रामायण’ सिर्जना गरेका हुन् । तीन पृष्ठको लेखमा वेदव्यासद्वारा लिखित ‘महाभारत’को कथाको सार गज्जबले प्रस्तुत गरिएको छ । ‘महाभारत’को दर्शन, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदिलाई लेखक÷पुनर्लेखकले उजागर गरेका छन्।
पश्चिमी शिक्षा पद्घतिको अन्धाधुन्द अनुकरणले हामीकहाँ पूर्वीय ज्ञान ओझेलमा परेको छ । वेद, उपनिषद, गीता लगायत अमर किताबका शाश्वत पक्षबारे शिक्षालयमा चर्चा–परिचर्चा कमै हुन्छ ।
पासा खेलमा हारेपछि पाण्डवहरूको १२ वर्ष वनबास, कुरुक्षेत्रमा भएको पाण्डव र कौरवबीचको ‘महाभारत युद्घ’लाई संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ । महाभारत युद्घमा अर्जुनका सारथि बनेका भगवान् श्रीकृष्णको भूमिका स्पष्टसाथ बुझ्न सकिन्छ यो पढेपछि । महाभारत लेखकका रूपमा वेदव्यासले गणेशलाई उपयुक्त पात्र ठह¥याएको प्रसंग भने ‘कोरा’ पाठकलाई काल्पनिक लाग्न सक्छ, पत्याइहाल्न गाह्रो पर्छ।
दासको ‘बुक फरइभर’मा ‘गीता’को च्याप्टर उल्लेख नगरिए पनि पुनर्लेखनका क्रममा यसलाई समावेश गरिँदा किताबको ‘ओज’ बढेको छ । महाभारत युद्घ हुन नलाग्दा भगवान श्रीकृष्णले आफू वक्ता भएर अर्जुनलाई जीवन, जगत, मृत्यु, आत्मा, युद्घ, धर्म आदिबारे बताएका कुरा उल्लेख छ । यस्ता ऐतिहासिक तथ्यसमेत समेटिएको छ, ‘प्रत्यक्षमा भने श्रीकृष्ण अर्जुनका सारथि मात्र थिए । उनी युद्घमा संलग्न थिएनन् । उनले हतियार उठाएका थिएनन् ।’सिद्घार्थ गौतमले बुद्घत्व प्राप्त गरिसकेपछि शिष्यहरूलाई सुनाएका कथा ‘जातक’ हुन् । जातक कथालाई रोमाञ्चक तरिकाले पुनर्लेखन गरिएको छ । ‘पञ्चतन्त्र’ अनि चाणक्य अर्थात् कौटिल्यद्वारा लिखित ‘अर्थशास्त्र’बारे पनि चर्चा गरिएको छ।
पश्चिमी शिक्षा पद्घतिको अन्धाधुन्द अनुकरणले हामीकहाँ पूर्वीय ज्ञान ओझेलमा परेको छ । वेद, उपनिषद, गीताका शाश्वत पक्षबारे शिक्षालयमा चर्चा–परिचर्चा कमै हुन्छ । अहिले मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण अनि कालजयी साबित भइसकेका कृति हराउँदै गएका छन् ।मन उद्वेलित पार्ने किताब निक्कै पाइन्छन्, तर, आत्मिक जागरण गराउने कृति कमै छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरेर प्रकाशन गरिएको ‘अमर पुस्तक’जस्ता कृति घरघर पुग्नुपर्छ । पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, मूल्य–मान्यता जान्न चाहने जोसुकैलाई यो किताबले पक्कै सघाउने छ।
कृति : अमर पुस्तक
लेखक :मनोज दास
पुनर्लेखक :मोहनकुमार दाहाल
पृष्ठ : ५६
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ ०७:३० शनिबार